IHUDWE LOMDOBI 1930s Iqhugwane elinohambo olufushane lwepulazi
I-Fishermans Hut e-KEIRANGI - Amaqhugwane angaphandle kwegridi, i-Camp Bay, yakhiwa ngesikhathi sokucindezeleka ekuqaleni kwawo-1930, igqoke amathini amadala acindezelwe Kaphalafini. Ibuyiselwe ngokweqiniso ukuze ujabulele le ndawo emangalisayo.
Hlala ngasogwini olunamadwala, uzizwe uhlukanisiwe futhi ungekho kugridi bese ungenisa umoya wolwandle. Imizuzu engama-45 kuphela ukusuka eChristchurch CBD. Nethezeka, hlola ugu olunamadwala, izinhlanzi futhi uvakashele amabhishi amahle aseduze. Hamba i-Old Pack Track uye e-Little Port Cooper futhi ujabulele ukuzola.
Iqhugwane elibuyiselwe ngokweqiniso elinokunethezeka. Igumbi lokulala elikhulu le-Master Queen elinokubukwa okupholile kwetheku kanye nomuzwa ofudumele we-rustic. Igumbi elingaphansi elilungele izingane noma izivakashi ezengeziwe. Zonke izingubo zokulala, ilineni, amathawula zinikezwa. Ukushisisa igesi, izibani zelanga kanye ne-gas cooker enawo wonke amagiya okupheka anikeziwe. Ikhishi elinosinki namanzi abandayo ahambayo. Igumbi langasese eliphuma ngaphandle elivundile kanye neshawa ebandayo ephuma ngaphandle evamise ukuba nemfudumalo ezinyangeni zasehlobo. Sikuphakela amafutha okupheka, itiye, ikhofi, ushukela, usawoti kanye nopelepele, izindwangu zamathawula etiye, izinto zosizo lokuqala njll. Letha ukudla kwakho, umgqomo obandayo ukuze ugcine ubisi lwakho lubanda namanzi okuphuza asemabhodleleni.
Awekho Amanzi Ashisayo
Akukho Ukufinyelela Imoto
Azikho Izilwane Ezifuywayo
Hlangana nathi e-Keirangi Homestead ukuze ulande ukhiye wakho futhi uthi sawubona. Khona-ke sizokuqondisa ohambweni lwakho olufushane lwe-1km futhi sikushiye. Uma kudingeka singakuthutha igiya lakho sikuyise endlini encane ngemali encane. Siyohlala sikhona uma usidinga.
Hlangana nathi e-Keirangi Homestead ukuze ulande ukhiye wakho futhi uthi sawubona. Khona-ke sizokuqondisa ohambweni lwakho olufushane lwe-1km futhi sikushiye. Uma kudingeka singaku…